Pfizer-BioNTech COVID-19 Tallaalka loo Oggolaaday Carruurta 5-11 Xaaladaha Degdegga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Pfizer-BioNTech COVID-19 Tallaalka loo Oggolaaday Carruurta 5-11 Xaaladaha Degdegga ah
Maanta, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ayaa oggolaaday isticmaalka degdegga ah ee tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 ee ka hortagga COVID-19 in lagu daro carruurta 5 ilaa 11 sano jir. Oggolaanshaha ayaa lagu saleeyay qiimaynta hufan iyo qiimaynta hufan ee FDA ee xogta oo ay ku jirto talobixin ka timid khubarada guddiga latalinta madaxa banaan kuwaas oo si wayn ugu codeeyay in tallaalka lasiiyo caruurta da'dan.
Qodobbada muhiimka ah ee waalidiinta iyo bixiyeyaasha:
Waxtarka: Jawaabaha difaaca ee carruurta 5 ilaa 11 sano jir waxay la mid ahaayeen kuwa shakhsiyaadka 16 ilaa 25 sano jir. Daraasadaas, tallaalku wuxuu 90.7% waxtar u lahaa ka-hortagga COVID-19 ee carruurta 5 ilaa 11.
• Badbaadada: Badbaadada tallaalka ayaa lagu daraaseeyay ku dhawaad ​​3,100 carruur ah oo da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 jir kuwaas oo qaatay tallaalka, mana jirto waxyeelo halis ah oo lagu arkay daraasadda socota.
• Guddiga La-talinta ee Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ee ku saabsan Dhaqannada Tallaalka ayaa kulmi doona toddobaadka soo socda si ay ugala hadlaan talooyinka caafimaad ee dheeraadka ah.
“Hooyo iyo dhakhtar ahaan, waxaan ogahay in waalidiinta, daryeelayaasha, shaqaalaha dugsiga, iyo carruurtu ay sugayeen oggolaanshaha maanta. Ka tallaalidda carruurta yaryar ee ka dhanka ah COVID-19 waxay noo soo dhowaanaysaa inaan ku soo laabanno dareenka caadiga ah,” ayay tiri Ku-simaha Guddoomiyaha FDA Janet Woodcock, MD in talaalkani la kulmo heerarkeena sare."
Tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 ee carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 sano waxaa loo qaataa si taxane ah oo laba-dose ah, oo u dhexeeya 3 toddobaad, laakiin waa qiyaas ka hooseeya (10 micrograms) marka loo eego kuwa loo isticmaalo shakhsiyaadka da'doodu tahay 12 sano iyo wixii ka weyn. (30 micrograms).
Gudaha Mareykanka, kiisaska COVID-19 ee carruurta 5 ilaa 11 sano jir waxay ka yihiin 39% kiisaska shakhsiyaadka ka yar 18 sano. Sida laga soo xigtay CDC, ku dhawaad ​​8,300 COVID-19 xaaladood oo carruurta 5 ilaa 11 sano jir ah ayaa keenay isbitaal. Laga bilaabo Oktoobar 17, 691 dhimasho ah oo ka timid COVID-19 ayaa laga soo sheegay Mareykanka shaqsiyaad ka yar 18 sano jir, iyadoo 146 ay u dhinteen 5 ilaa 11 sano jir.
"FDA waxaa ka go'an in ay samayso go'aamo uu hagayo sayniska oo ay dadweynaha iyo bulshada daryeelka caafimaadku ku kalsoonaan karaan. Waxaan ku kalsoonahay badbaadada, waxtarka iyo xogta wax soo saarka ee ka dambeeya oggolaanshahan. Iyada oo qayb ka ah go'aankeenna daahfurnaanta ee ku aaddan go'aan-qaadashadayada, oo ay ku jiraan shirkii guddiga la-talinta dadweynaha horaantii usbuucan, waxaan maanta dhejinay dukumentiyo taageeraya go'aankayaga iyo macluumaadka dheeraadka ah ee faahfaahinaya qiimeynteena xogta ayaa dhawaan la soo dhejin doonaa. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu gacan ka geysto dhisida kalsoonida waalidiinta go'aaminaya in carruurtooda la tallaalo iyo in kale," ayuu yiri Peter Marks, MD, Ph.D., maamulaha Xarunta Qiimeynta iyo Cilmi-baarista Bayolojiga ee FDA.
FDA waxay go'aamisay in tallaalkan Pfizer uu buuxiyey shuruudaha oggolaanshaha isticmaalka degdegga ah. Iyada oo ku saleysan wadarta caddaymaha sayniska ee la hayo, faa'iidooyinka la yaqaan iyo kuwa ka iman kara ee tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 ee shakhsiyaadka da'doodu ka yar tahay 5 sano ayaa ka miisaan badan khatarta la yaqaan iyo kuwa iman kara.